२०७५ पौष २२ आइतबार, काठमाडौं । १४ वर्षदेखि कोमामा रहेकी एक महिलाले बच्चा जन्माएको खुलासा भएको छ । अमेरिकाको एरिजोनास्थित हेसिन्डा हेल्थ केयरमा करीव ४० वर्षदेखि कोमाको उपचार गराइरहेकी महिलाले बच्चा जन्माएकी हुन् । बच्चाको अवस्था स्वस्थ्य रहेको समेत जनाइएको छ । ... बाँकी अंश»
विश्वका विभिन्न देशमा आईतबार सूर्यग्रहण, व्यापारमा मिश्रित प्रभाव
२०७५ पौष २२ आइतबार, काठमाडौं । आईतबार विहान नेपाली समय अनुसार ५ बजेर १९ मिनेटदेखि विश्वका विभिन्न देशहरुमा खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लागेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष २० शुक्रबार, काठमाडौं । स्वास्थ्यको मामिलामा नेपालीहरु खासै संवेदनशील भएको पाइँदैन। जे भेटिन्छ, त्यसको प्रभावको विषयमा कुनै वास्ता नगरी खाने हाम्रो बानी छ। यसले मानिसको स्वास्थ्यमा कहिलेकाँही नकारात्मक प्रभाव पनि पार्ने गरेको छ । यहाँ केही बाहिरी मुलुकहरुमा प्रतिबन्धित खानेकुराहरु उल्लेख गरिएको छः ... बाँकी अंश»
के ट्रम्पको नामले राख्ला भारतको गाँउ सफा ?
२०७५ पौष २० शुक्रबार, काठमाडौं । भारतको गाँउ-गाँउमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाममा अभियान चलाइएको छ। ट्रम्पको नाममा खुल्ला दिशा पिसाब मुक्ति अभियान चलाइएको हो । ... बाँकी अंश»
यहाँ सन्तान जन्माए पाइन्छ लाखौ रुपैयाँ, सरकार गरिरहेछ जनतामा अपिल
२०७५ पौष २० शुक्रबार, काठमाडौं । प्रकृतिको खेल पनि अचम्मको हुन्छ । कहि मानिसहरु यती धेरै छन् कि जनसंख्या कम गर्न दुविधा बनेको छ कहि मानिसको संख्या यती कम छ कि जनसंख्या कसरी बढाउने सरकार लगातार यस बारेमा अपिल गरिरहेको छ । ... बाँकी अंश»
गुगलको जागीर छोडेर कसरी बने मुनाफ लखपति ?
२०७५ पौष २० शुक्रबार, काठमाडौं । गुगलको जागीर छोडेर मुनाफ कापडिया समोसा बेच्न थालेका छन् । कापडियाले गुगलको जागीरबाट राजीनामा दिएर समोसा बेच्न थालेका हुन् । मुनाफले यो निर्णय कुनै दवावमा नभएर आफ्नो इच्छाले लिएका हुन् । अब उनको बार्षिक कमई डिग्री सकेका मानिसहरुको भन्दा ज्यादा रहेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष १९ बिहिबार, काठमाडौं । ‘सिटि अफ सेम’को नामले विश्वभर चर्चित विश्वको सबैभन्दा पुरानो सहरमध्येको एक हो मटेरा । यो सहर ८ हजार वर्ष पुरानो रहेको बताइने गरेकोा छ । इटालीमा रहेको यो सहरमा अझै पनि मानिसहरु गुफामै बस्ने गर्छन् । ... बाँकी अंश»
माझीले ढुङ्गा सम्झेर खाटमुनि राखेको मोती विश्वकै ठूलो, तौल ३४ केजी
२०७५ पौष १९ बिहिबार, एजेन्सी। फिलिपिन्सका एक माझिले ढुङ्गा सम्झेर खाटमुनि राखेको मोती विश्वकै ठूलो रहेको बताइएको छ । ३४ केजी तौल रहेको सो मोती, विश्वकै ठूलो मोती रहेको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष १९ बिहिबार, काठमाडौं । विश्व इतिहासको पानामा धेरै नाम सुन्न पाइन्छ, जो निकै क्रूर भएको कारण चर्चित थिए । यस्तै एक महमूद गजनवी पनि आफ्नो क्रूरताको कारण संसारमा चर्चित छन् । ... बाँकी अंश»
आईफोन किन्न युवकले उठाए यस्तो जोखिम, मृत्युसँग संघर्ष गर्दै
२०७५ पौष १८ बुधबार, काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले प्रत्येक वर्ष विश्व बजारमा नयाँ आईफोनको उत्पादन ल्याउने गरेको छ । यस्तोमा आईफोनबारे एक चर्चित उक्ति छ– आईफोन किन्न मिर्गौला बेच्नुपर्छ । यो रमाइलोका लागि मात्र भनिने गरिएको हो तर चिनियाँ एक युवकले भने वास्तविकतामै मिर्गौला बिक्री गरेर आईफोन खरिद गरेका छन् । जसको कारण अहिले उनी मृत्युसँग जुधिरहेका छन् । ... बाँकी अंश»
८ ओटा जागिर छाडेर आफ्नै व्यापार, वार्षिक करोडौंको आम्दानी
२०७५ पौष १७ मंगलबार, काठमाडौं । भनिन्छ, जहाँ दुःख हुन्छ, त्यहीँ सुखको सम्भावना पनि हुन्छ । कसैले अथक प्रयास गरेर आफ्नो उद्देश्यमा अघि बढ्छ भने उसले कुनै न कुनै बाटो भेटाउन सक्छ । ... बाँकी अंश»
युरोपको एकमात्र देश, जहाँ सबै नागरिकसँग छ आफ्नै घर
२०७५ पौष १५ आइतबार, काठमाडौं । आफ्नो सौन्दर्य र मनमोहकताले भरिएका संसारका केही मात्र मुलुकहरु छन् । जसमा युरोपियन मुलुक फिनल्याण्ड पनि एक हो । ... बाँकी अंश»
रेलको ड्राइभर बन्न के गर्नुपर्छ ? ट्रायल दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
२०७५ पौष १५ आइतबार, काठमाडौं । नेपालमा पनि धेरै रेलको सपना देखाईँदै छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थितीका कारण अझैसम्म पनि नेपालमा नै रेल चढ्ने सपना पूरा ... बाँकी अंश»
बाँदरसँग महिलाकाे शारीरिक सम्बन्ध, ३ वर्षको जेल सजाय
२०७५ पौष १४ शनिबार, काठमाडौं । मिश्रको एक अदालतले बाँदरमाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा २५ वर्षीया एक महिलालाई ३ वर्षको जेल सजाय तोकेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष १४ शनिबार, काठमाडौं । रूसको उत्तरी ओसेटियाको सुदूर वीरान इलाकामा दर्गाव्स नामको एउटा गाउँ छ । यो ठाउँलाई ‘सिटी अफ द डेड’ अर्थात् ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष १४ शनिबार, काठमाडौं । मानिस खुशी कसरी हुन्छन् ? पैसा कमाएर महलमा बस्दैमा मानिस कहिले पनि खुशी हुन सक्दैनन् । पैसा कमाएर मात्रै पैसा हुन्थे भने यो ... बाँकी अंश»
कहाँ पाइन्छ विश्वकै दुर्लभ मानिने कालो स्याउ ?
२०७५ पौष १३ शुक्रबार, काठमाडौं । अंगुर हरियो पनि हुन्छ र कालो पनि हुन्छ । तर कहिल्यै तपाइँले कालो स्याउ देख्नुभएको छ ? हामी सबैले रातो स्याउ त खाएका छाैं तर कालो स्याउको बारे धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । ... बाँकी अंश»
पुसमै लालीगुराँस रात्तै भएपछि
२०७५ पौष १३ शुक्रबार, जाजरकोट । लालीगुराँस फुल्ने समय फागुन र चैत महीना हो । जलवायु परिवर्तनका कारणले लालीगुराँस मङ्सिर पुस महीनामै फुल्न थालेको छ । ... बाँकी अंश»
अफ्रिकाको सानो टापु, जहाँ हुन्छन् सबै किसिमका खराब काम
२०७५ पौष १२ बिहिबार, काठमाडौं । सामान्यतः टापु भन्नेबित्तिकै मानिसको मनमा हरियाली तस्वीर तथा मनमोहक दृश्य आउँछ । विश्वमा यस्तो पनि टापु छ, जुन धेरैको सोचभन्दा फरक किसिमको छ । युगाण्डा र केन्याको सीमामा रहेको दक्षिण अफ्रिकाको भिक्टोरिया तालनजिकै बनेको ‘मिगिनगो द्वीप’ निकै विशेष किसिमको छ । ... बाँकी अंश»
आमाले मागेको उपहार दिन सलमानले मागे एक वर्षको समय
२०७५ पौष १२ बिहिबार, काठमाडौं । सलमान खान बिहिबार आफ्नो ५३ औँ जन्मदिन मनाएका छन् । यो विशेष अवसर सम्झनलायक बनाउन सलमानले आफ्नो पनवेल फार्म हाउसलाई रोजे । जहाँ सलमानले आफ्नो परिवार र मित्रहरुसंग आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् । सलमानको जन्मदिन मनाएका केही विशेष तस्वीरहरू र भिडियोहरू सार्वनजिक भएका छन् । सो भिडियोमा सलमान भान्जा अर्पिता खान शर्माको छोरासँग केक काटदै गरेको देखिएका छन् । उनको कथित प्रेमिका यूलिया वंतूर सलमान लागि जन्मदिन गीत गाएकी छन् । सो अवसरमा उनलाई सबैले उपहार दिएका छन भने उनको आमाले जन्मदिनमा उपहार मागेकी छन् । ... बाँकी अंश»